काम एउटै तर महिला-पुरूषकाे ज्यालामा विभेद ! - Vision Nepal TV
Published: November 24, 2018 | 5:16 am | शनिबार, मंसिर ८, २०७५ | २८७३ पटक पढिएको
कुश्मा। लालु सुनार (मोदी गाउँपालिका–६ तिलाहार) र गङ्गा नेपाली (कुश्मा नगरपालिका ९, कटुवाचौपारी) ले सदरमुकाम कुश्मा आसपासमा निर्माण मजदूरका रुपमा काम गर्न थालेको करीब चार वर्ष भयो ।
घर ढलान गर्ने क्रममा बालुवा बोक्ने, उठाउने, ढलानलगायत सबै काम दुईजनाले आलोपालो गर्ने गर्नुहुन्छ । एउटै काम गर्ने दुईमध्ये सुनारले दैनिक रु ५०० र नेपालीले रु ३५० ज्याला पाउनुहुन्छ । उहाँहरु मात्र होइन निर्माण मजदूरकै रुपमा काम गर्ने शान्ति परियारले पाउने दैनिक ज्याला पनि उस्तै छ । सँगसँगै काम गर्ने मनोज सार्कीले रु ५०० पाउँदा आफूले भने रु ३५० मै चित्त बुझाउनु परेको उहाँको गुनासो थियो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले समान कामका लागि महिला–पुरुषबीच विभेद गर्न नहुने कानून भए पनि व्यवहारतः त्यो लागू हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । “पटक–पटक सिडिओ कार्यालयमा बस्ने बैठकमा कुरा उठ्छ । विभेद गरे कारवाही हुन्छ पनि भनिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कारवाही हुँदैन । ठेकेदारले भित्रभित्रै निकै विभेद गरेका गुनासा आउँछन् । काम नपाउनुभन्दा थोरैमा पनि चित्त बुझाउन बाध्य हुनुपर्छ ।”
२८७४ Total Views ३ Views Today
← मन्त्री उपेन्द्र यादव भन्छन् : सरकारले आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धि छुट्टै नीति बनाउने छ
प्रदेश नं १ मा कति छन् हिमाल ? अवलोकन गर्न उडान शुरु →
एफएमको स्टुडियोभित्रै ‘संचारकर्मी जोडी’आपत्तिजनक अवस्थामा मालिकले भेटेपछि….
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा युवाहरुको भूमिका मुख्य : बाबुराम
सांसदहरुको तलव भत्तामा भारी वृद्धि, खाडिमा युवाहरुले बगाएको पसिनामा गर्ने भयो मोज